Hatramin’ny desambra 2020, hampidirina amina sehatra manara-drafitra ireo mpitrandraka volamena roa hetsy (200 000), ny mpanangona volamena 500, ary hisy “comptoir de l’or” 50 hatsangana. Hotohizana, noho izany, ny fanatsarana ny fanomezana fahazoan-dalana fitrandrahana harena an-kibon’ny tany. Hapetraka ny foibe ho an’ny volamena sy ny vatosoa any amin’ny faritra. Hatsaraina miaraka amin’izany ny fepetra fampidiram-bola avy amin’ny asa fitrandrahana harena an-kibon’ny tany
Ampitomboina avo roa heny ny famokarana herinaratra ato anatin’ny dimy taona, avy amin’ny angovo azo havaozina. Hialana tsikelikely ny fampiasana solika mahazatra hatramin’izay sy hifehezana ny saran’ny famokarana. Efa natomboka ny asa fanamboarana foibe famokarana herinaratra avy amin’ny rano ao Sahofika (190Mw) sy Volobe (120Mw). Ezahina ho vitaina tanteraka ireo amin’ny taona 2023.
Atomboka, amin’ity taona ity, ny fambolen-kazo amina velaran-tany 40 000 ha isan-taona. Laharam-pahamehana ny fanomezan-danja ny toekarena maitso, koa atomboka amin’ity taona ity ihany koa ny fanodinana fako any amin’ireto tanàna ireto : Toamasina, Antsiranana, ary Antananarivo Avaradrano. Atao izany fanodinana fako izany hahazoana akora hanoloana saribao. Atomboka amin’ity taona ity ny fiaraha-miasan’ny fanjakana amina sehatra tsy miankina hahazoana mivarotra etona (gaz) an-tsinjarany, iray hatramin’ny efatra kilao.
Havaozina ny biraon’ny paositra 250 manerana ny Nosy. Havaozina ny Foiben’ny paositra malagasy eo Antaninarenina, tokony ho vita amin’ny 2020. Momba ny Paositra Money, hisy ny fiaraha-miasa amina orinasa sy tranombarotra lehibe maro, ao anatin’ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Tanjona ny hahazoana mpanjifa ny Paositra Money telo hetsy (300 000) ao anatin’ny roa toana.
Hapetraka manokana ny politika vaovao eo amin’ny fitaterana hampivoarana ny sehatry ny fizahantany. Tsy maintsy atao ny fanitarana sy fampanarahana fenitra ny fotodrafitrasa mahakasika ny fitaterana rehetra : an-tanety, anabakabaka, an-dranomasina. Asiana toeram-pialan-tsasatra sivy hekitara any Ampefy, vitaina mialoha ny volana desambra 2019. Hatsaraina koa ny fitateram-bahoaka eto an-dRenivohitra sy any amin’ny faritra.